Azerbaijan inoona zvakare yakanaka chikamu mu COVID-19
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Azerbaijan Breaking Nhau » Azerbaijan inoona zvakare yakanaka chikamu mu COVID-19
Azerbaijan Breaking Nhau • Kuputsa Kufamba Nhau • Hotera & Resorts • Investments • nhau • vanhu • Kutarisirwa • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Kubva pakatanga kuputika kwe COVID-19 muna Zvita 2019, iyo coronavirus yakaenderera ichitapura vanhu vane mamirioni maviri pasirese uye ichipararira pasirese zvichikonzera kufa kwevanhu vanopfuura 2 vanhu. Kwete kubvira furuwenza yeSpain inopfuura zana ramakore yapfuura ine denda rakakanganisa kukuvara kwakadai pahuwandu hwepasirese munzvimbo pfupi pfupi yenguva.
Mukupindura kunetso kuri kuenderera mberi, nyika pasirese dzakatora nzira dzakasiyana siyana kuyedza kudzora kupararira kwehutachiona kusanganisira kukiya kwenyika uye kuwedzera kukwirisa kuti vaone kuti ndiani ane chirwere ichi. EU yakarambidza chero munhu kubva kunze kwechikwata kupinda mukati kwemazuva makumi matatu, uye nhepfenyuro dzichangoburwa dzakaratidza kuti nzvimbo yeEuropean Schengen ingafanira kuchengeta miganhu yayo yakavharwa kusvika munaGunyana. Nyika dzinoverengeka dzakazivisa zvisati zvamboitika zvehupfumi kusimudzira hupfumi hwenyika, kuchengetedza mabasa, uye kutsigira mabhizinesi. United States yakapindura, kunyangwe kunonoka, nekuzivisa iyo $ 30tn yekukurudzira pasuru yekubatsira kusimudzira hupfumi hwenyika hukuru; yakakosha kune tarisiro yekutengeserana kwepasirese uye kubudirira kwakawanda. Pamusoro pezviyero zviri pamusoro, zvikoro zvakavhara zvakawandisa, zvichinyima vana dzidzo yakakosha yavanoda kuumba hupenyu hwavo hweramangwana. Kudonhedza hupfumi kwakazara uko kunosvika kuchaunza matambudziko akakomba kumabhiriyoni pasirese.
Zvisinei, kunyangwe paine nguva dzinonetsa uye dzakaoma idzo isu tese tiri kupupura, pachine zvikonzero zvekuva netariro.
Kunonoka kwezvirwere nekusimudzwa kwemitemo
Zvibvumirano muWuhan, guta reChinese uko COVID-19 yakatanga kuwanikwa, zvakasimudzwa mushure memwedzi ingangoita mitatu yekuvharirwa. MuSpain, imwe yenzvimbo dzekutanga dzekuputika, kukura kwehutachiona hutsva kwave kudonha kutsva kubva pakatanga kubuda. Idzi inhau dzinokurudzira uye dzinoratidza kuti nyika zhinji dzakatapurwa zvakaipisisa uye dzakatakura mutoro wehutachiona dzinogona kunge dzakasvika kana kuti dziri padyo nenhamba yepamusoro yezvirwere zvitsva. Izvo zvinodikanwa zvekuzviparadzanisa wega uye zvekuvhara masisitimu izvo zvine simba rakakura kwazvo paupfumi hwepasirese uye nehupenyu hwedu hwezuva nezuva haizove pano nekusingaperi. Isu tese tinofanira kubatana uye kutsungirira uye kurega kufunga kwevashandi vehutano vari kumberi avo vari kuisa hupenyu hwavo panjodzi kuti vaponese veduwe. Vanounza chirevo chitsva kune izwi rekuti magamba.
Nyika ine mutsa
Kunyangwe kutya uye kutya kwakakonzerwa nehutachiona, yakakurudzirawo mutsa uye yakatibvumidza kupupurira divi riri nani revanhu. Mienzaniso yekuzvipira inogona kuoneka mukugadzirwa kwe "nguva yechikuru" muAustralia, uye "sirivha awa" muUK muzvitoro kuti vadzivirire vakwegura uye vatendere nhengo dzinotambura dzevagari kutenga grocery munzvimbo yakachengeteka. MuItaly, nharaunda dzese dzakaonekwa dzichiimba kubva kumabalkoni avo kusimudzira hunhu hwevamwe vavanogara navo, zvichikonzera kufamba kwekopiki pasirese. MuUK, muraraungu wakapendwa nevana mukutsigira National Health Service (NHS) yakashongedza mahwindo edzimba, nepo nyika yese ichimira kuma8 masikati China wega wega kumira nekuombera maoko vashandi veNHS vachiisa hupenyu hwavo panjodzi.
Zvizhinji zvepasi zvakaungana pamwechete kuti zvipe mari uye nehunyoro nekuzvipira kubatsira avo vanotambura. Mr. Heydarov vakati: "Ndinodada kutaura izvi nekuda kwekutyisidzira kwakakonzerwa neCoronavirus, Gilan Kubata boka iri kutamba chikamu chiduku mukuedza kumisa kupararira kwechirwere. Kubva pane zvatinozvipira kuCorporate Social Responsibility (CSR) neruzhinji rwevanhu veAzerbaijani, isu tashandura nzvimbo dzedu dzehotera kuti dzishandiswe senzvimbo dzekuparadzanisa vanhu kuti dzibatsire matanho ezvehutano pamwe nekupa Manat 1 miriyoni kuhomwe yenyika kuti irwisane neCovid -19. Pamusoro pezvo, Gilan Textile Park yakachinja mashandiro ayo ekugadzira 30,000 ekudzivirira hovhoni pavhiki uye anopfuura mamirioni emasikisi ekuvhiya. Kunyangwe izvi zvingave zviito zvidiki, ndinovimba kuti zviito izvi zvichabatsira kudzora kupararira kweutachiona munyika yangu yekuzvarwa. ”
Yakawedzerwa nguva yemhuri
Nekuda kwezviyero zvakatemerwa nehurumende uye tarisiro yezvinorehwa nechirwere ichi, mhuri pasi rese dzave kushandisa nguva yakawanda pamwe chete uye kuuya pamwechete. Vabereki vane hupenyu hwakabatikana hwehunyanzvi vava kunyanya kushanda kubva kumba uye vanogona kunakirwa nenguva yakanaka, nekukanganisika kunowanzoitika kumusangano wavo wekufona, nevana vavo vari pamba nekuda kwekuvharwa kwechikoro. Mhedzisiro isingafungidzirwe yechirwere ichi chinotyisa ndechekuti isu tinomanikidzwa kumira nekuonga mhuri dzedu nevadikanwi tichifunga nezve mamiriro ezvinhu anotyisa atinotarisana nawo.
Kutevera kukundwa kwe COVID-19 - uye isu tichaikunda - hupenyu hwedu hahuzombove hwakafanana zvakare, tiine tariro yekuvandudzwa kwenzvimbo uye kukosha kwekushandisa nguva yakanaka nevatinoda. Iyo nharo pamusoro pekuenzana uye mubhadharo wakaringana wevashandi vemberi yapera. Ivo ndivo vakanakisa vedu. Kana izvo zvikaitika, chimwe chinhu chakanaka chinobuda kubva munjodzi iyi. Hunhu husina kusarudzika hwehutachiona uhwu hunosimbisa hunhu hwedu uye chokwadi chisingazungunuke chatiri mune izvi pamwechete. Tinofanira kuramba takabatana, kushanda pamwechete, uye kubuda nesimba kune rimwe divi.
Zvimwe zveAzerbaijan zvekufamba nhau